Sanad-guuradii kowaad oo ka soo wareegtay bilowgii kacaanka dhiiga badani ku daatay ee dalka Suuriya. – Radio Daljir
Sanad-guuradii kowaad oo ka soo wareegtay bilowgii kacaanka dhiiga badani ku daatay ee dalka Suuriya.
Damascus, Mar 15 – Kacaanka dadweyne ee dalka Suuriya ayaa maanta sanad-jirsaday , waxana ay maanta ku beegnatahay xilligii ay dad mudaharadayaal ah oo reer Suuriya ah,islamarkaana dalbanayey isbedel dhinaca Siyaasadda ah ay la kulmeen rasaasta ciidamada ammaanka.
Kacaan-wadayaasha reer Suuriya ayaa waxaa dhiirigeliyey kacdoomadii dadweyne ee ka hanaqaaday dalalka Tunisia iyo Masar oo lagu riday hogaamiyayaal dheeraystay xukunka dalalkaasi.
Dowladda dalka suuriaya ayaa gacan bir ah ku muqunisay kacdoonka dalka Suuriya , waxana tallaabooyinka ciidamada nidaamka Suuriya si weyn u canbaareeyey beesha caalamka.
Xilligan ciidamada dowladda suuriya ayaa qabsaday magaalooyinka Dirca iyo Idlib ,waxana ciidamada dowladu ay kor u qaadayaan dagaalka ka dhanka ah mucaaradka, xilliga lagu gudajiro xuska sanad-guuradii kowaad ee ka soo wareegtay kacaanka dadweyne ee dlka Suuriya.
Ergeyga qaramada midoobey iyo jaamacadda carabta ee dalka Suuriya ee Kofi Annan ayaa weydiistay dowladda suuriya in ay jawaab ka bixiso 5 qodob oo ah hindise hore loogu gudbiyey Dimishiq.
iyadoo hawlaha diblamaasiyadda ee lagu afjarayo khilaafka Suuriya ay u muuqdaan kuwo aan shaqaynayn ayaa ciidamada Suuriya ku gacan-sareeyaan dagaalka .
qaramada midoobeya ayaa sheegtay in dadka ku dhintay khilaafka sanad-jirsaday ee dalka Suuriya ay sii siyaadayaan maalinba maalinta ka dameysa.